K30 5G Speed Edition ကို မေလ ၁၁ ရက်မှာ ကြေညာမယ်
Snapdragon Chip အသစ်နဲ့ မိတ်ဆက်လာဖွယ်ရှိတဲ့ K30 5G Speed Edition
March! March! Redmi Army လို့ပဲ ပြောချင်ပါတော့တယ်။ Quarter ၁ ခုထဲမှာကိုပဲ မော်ဒယ် ၄ မျိုးမက မိတ်ဆက်နိုင်လို့ ချီတက်ပါ သုံးနှုန်းလိုက်တာပါ။ K30 5G Speed Edition ကို မေလထဲမှာ မိတ်ဆက်ဦးမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အစ်ကိုတော်တွဲနဲ့ ဘာကွာသွားမလဲ?
၂၀၁၉ ဒီဇင်ဘာလထဲမှာ ပထမဆုံး ပွဲထုတ်ခဲ့တဲ့ K30 ကပဲ ခြေရာကောက်ရရင် Speed Edition က Minor Improvement ဖြစ်လာမယ် ဆိုရမှာပါ။ ခုထိတော့ ဘာမှ မသိရသေးသသလို Xiaomi ရဲ့ Brand အခွဲဖြစ်လာတဲ့ Redmi က အသေးစိတ်ကို ၁၁ ရက်နေ့မှာ ကြေညာသွားမှာပါ။
ခုလို ထူးခြားလာမယ့် အချက်တွေ စကားဖြည့်ပြောရင်း စီးရီး Analysis လုပ်ရရင် K30 ဟာ Snapdragon 765G SoC နဲ့ ပထမဆုံး 5G-enabled စမတ်ဖုန်းအဖြစ် မိတ်ဆက်ခဲ့တာပါ။
သူနဲ့အတူ K30 4G (SD 730G) ကိုပါ ကြေညာခဲ့ပြီး အားအရဆုံး ဖြစ်စေတဲ့အချက်က Flagship နီးပါး ကောင်းမွန်တဲ့ IMX686 Sony Sensor နဲ့ ပွဲထုတ်ခဲ့တာပါ။
K30 Pro Sereis (Image: The Verge)
ဒါ့အပြင် 120Hz Refresh Rate Display အပြင် 30W Fast Charging ပါဝင်တဲ့ ဖုန်းတလုံးအတွက် ရောင်းချတဲ့ စျေးနှုန်းက ကျေနပ်စရာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက် ဘယ်လိုပြောမလဲ ပွဲဦးထွက် လှသွားတယ်ပေါ့။
ဒါနဲ့ 2020 ရောက်တော့ Successor ဖြစ်လာတဲ့ K30 Pro ကို Flagship Killer အဖြစ် မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။
4 Variants at this time
Pro မော်ဒယ်ကတော့ ရိုးရှင်းစွာနဲ့ပဲ Snapdragon 865 SoC ထွေးပိုက်ထားတာမလို့ Power User အတွက် သင့်တော်သလို High Performer ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့ ရွေးချယ်စရာ ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ ခုလည်း K30 နောက်မော်ဒယ်တစ်ခု ကြေညာတော့မှာ ဖြစ်သလို Redmi ပရိသတ်တွေ ဖုန်းဝယ်ပျင်းနေကြပြီလားဗျ?
နောက်တာပါ။ GizmoChina သတင်းအရ K30 နဲ့တွဲရက် စာလုံးမှာ 5G စကားလုံး ထင်းထင်းကြီး ပါဝင်လာသလို Speed Edition က နောက်တမျိုး တွေးကြည့်ရင် Performance ပိုင်းထက် 5G ဖက် နွယ်မယ် ယူဆရပါတယ်။
ဒါကို Xiaomi Weibo Account ကတဆင့် သိရှိရတာဖြစ်ပြီး 5G Speed Edition ကို JD.com ကတဆင့် ရောင်းချသွားမယ်လို့လည်း ပြောထားပါတယ်။ လက်ရှိ Retailer Website ထဲမှာ စမတ်ဖုန်းကို Tease လုပ်နေပြီ ဖြစ်သလို Dual Punch-hole ပါဝင်မယ်…
K30 5G …..is coming
Screen အရွယ်စား အတိကျ ပေါက်ကြားထားခြင်း မရှိသေးပေမယ့် 6.67” ပဲ ဖြစ်မယ်လို့ ထင်ကြေးပေးနေကြပါတယ်။ ထို့နည်းတူစွာ 120Hz Refresh Rate ကိုပဲ အသုံးပြုဖွယ်ရှိနေသလို K30 Siblings တွေလို 64MP Primary Shooter ပါဝင်ဦးမယ်လို့ ခန့်မှန်းနေကြပါတယ်။
မသေချာ မရေရာ ဖြစ်နေတဲ့အချက်က Qualcomm ကတောင် မကြေညာရသေးတဲ့ Snapdragon 768G SoC သုံးလာမယ် ဆိုတာပါ။ Nevertheless စမတ်ဖုန်းသစ်တွက် Chip အသစ်သုံးတာ မဆန်းပေမယ့် Dimensity Chip ရော ဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလား?
ဒါမယ့်လည်း Leak News က ခိုင်မာသလောက် ရှိနေတာမို့ 768G နဲ့လဲ မြင်ရဖို့များမယ့် ကိန်းရှိပါတယ်။ အကယ်၍ Snapdragon Chip သစ် ထွက်လာခဲ့ရင်လည်း 765G အတိုင်း Follow-up လုပ်နိုင်ပြီး အပေါ်မှာ ပြောခဲ့သလို Minor Improvements ရှိလာမှာပါ။
Highlighted as 5G Speed Edition
အများစု လက်ခံထားတဲ့အချက်က 765G ထက် 865 ပိုကောင်းသလို Mid-range SoC သစ်က သိသာတဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်မျိုး ပေးစွမ်းမှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲ့တော့ မျှော်လင့်စရာက နာမည်အတိုင်း 5G နည်းပညာဖက် အားဖြည့်ထားတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ခုလို မေလ အတွင်းထွက်ရှိလာမယ့် K30 5G Speed Edition ဟာ အရင်တခါ Speculate လုပ်ခဲ့ကြတဲ့ Picasso နာမည်ခံ K30i ဖြစ်မလာပေမယ့် Redmi အနေနဲ့ မိတ်ဆက်ဦးမယ် ထင်ပါတယ်။
အဆိုပါ K30i ဟာ မော်ဒယ်အားလုံးထဲက စျေးအသက်သာဆုံး ဖြစ်လာနိုင်ပြီး 64MP ကနေ 48MP တဆင့်ဆင်းပြီး Cheaper Variant အဖြစ် ထုတ်ပြလာနိုင်ချေ ရှိတယ်လို့ အစောပိုင်းက ခန့်မှန်းမှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
Source: GSMArena ၊ XDA Developers 1 ၊ 2
Reasons why I bought iPad Mini5in 2020 (Review included)